Amerika Latina · Novambra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Latina · Novambra, 2011
Tantara mikasika ny Amerika Latina tamin'ny Novambra, 2011
Venezoela 29 Novambra 2011
Mandray ny Vovonana Manerantanin'ny Hosodoko atao amin'ny Vatana, amin'ity taona ity, i Caracas ary ifampizarana amin'ny valan-tserasera ny endrika sasany mety handona avy amin'izany zavakanto izany. Ao anatin'izany famoronana izany dia nomena sehatra manokana amin'ny fomba fanehoana ara-javakanto atao amin'ny vatan'olombelona ny vazimba ao Venezoelà.
Arzantina 23 Novambra 2011
Però 21 Novambra 2011
Talata, 8 Novambra, dia nanamarika ny andro faha enina amin'ny grevin'ireo mpamboly izay manohitra ny lahasa fitrandrahana ao amin'ny faritr'i Andahuaylas, ao Apurímac, faritr'i Peroa. Nanao fanadihadiana tamin'ny alàlan'ny Twitter ireo mponina koa satria moa mbola nitohy ilay grevy.
Però 20 Novambra 2011
Goatemalà 17 Novambra 2011
Kolombia : Maty Ilay Mpitarika Ara-Poto-kevitra Ngeza Lahy Tao Amin'ny FARC, “Alfonso Cano”
Kolombia 13 Novambra 2011
Alfonso Cano, ilay mpitarika ngeza lahy amin'ny "Revolutionary Armed Forces of Colombia" (FARC) na ny Hery Revolisionera Mitam-piadiana ao Kolombia, dia lavo ny 4 Novambra tao amin'ny departemantan'i Cauca nandritra ny ady nifanaovana tamin'ny miaramila. Ny Kolombiana dia naneho hevitra mikasika ny nahafatesany tao amin'ny bilaogy, ary naneho koa ny fijeriny tao amin'ny Twitter tamin'ny fampiasany ny tenifototra #AlfonsoCano.
Kiobà 08 Novambra 2011
Pôrtô Rikô (Etazonia) 04 Novambra 2011